Ingiriisi guud - Dugsiga Dhexe ee Bartamaha, Cambridge
Waxqabadka iyo Barnaamijka Bulshada
Qiimayaasha Waxqabadka Xulashada
La kulan kooxdaada
La kulan dugsigaaga
Koorsooyinka aan bixino
Ingiriisi degdeg ah
Imtixaan heerka Ingiriisiga
Sidee loo Isku qoraa
Sidee loo qorayaa?
Isku qor internetka
Macluumaadka Visa ee UK
Foomka Diiwaangelinta PDF
Lacag bixiya ama deebaaji
La xiriir ama naga iibso
Lacag bixiya ama lacag dhigaal
Koorsada Ingiriisiga ah waa saacadaha 15 toddobaadkii subax kasta oo ka bilaabmaya 09: 30 iyo dhammeystirid 13: 00 oo leh fasax kafeega 11: 00.
Waxaan isticmaalnaa buugaag kala duwan * sannad-dugsiyeedka oo dhan laga soo bilaabo heerka Hoose ilaa Heerka Sare. Waxaa jira fursado badan oo aad ku baran karto hadalkaaga iyo dhageysiga iyo sidoo kale dhawaaqaaga, erayada, akhriska, naxwaha iyo qorista. Toddobaad kasta macallimiintaadu waxay ku qori doonaan macluumaadka ku saabsan fasalada shaashadda.
Maalmaha Isniinta waxaad dib u eegi doontaa shaqada toddobaad ka hor ama aad qaadato imtixaanka horumarka billaha ah. Waxa kale oo aad baran kartaa mowduuc khaas ah luqada sida Farsamada Phrasal ama Hadalka Maalinlaha.
Dhamaadka todobaad kasta waxaad fursad u leedahay inaad qiimeyso casharrada waxaadna weydiisan kartaa ballan bille ah bilowga macalinkaaga.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa tijaabada imtixaanka (ardaydaas oo qaata imtixaannada sida KET, PET, FCE, CAE, CPE ama IELTS).
Ardayda waqti-buuxa ee soo bartay todobaadyada ama ka badan 2 waxay heli doonaan shahaadada iyo warbixinta dhammaadka koorsadooda.
* Ma jiro wax lacag ah buugaagta koorsada haddii aan lumin ama waxyeelleyn.
Koorsada Ingiriisiga ah waa saacadaha 15 toddobaadkii subax kasta oo ka bilaabmaya 09: 30 iyo dhammeystirida 13: 00...	Read More
Ardayda doonaya inay waqti badan ku qaataan barashada Ingiriisiga waxay isku qori karaan koorsada Ingiriisiga ah ee degdegga ah (saacadaha 21 usbuucii)....	Read More
MASUULKA AFKA KOOWAAD Waxa aad bilaabi kartaa koorsadaada habeenka Talaadada ka dib markaad qaadatay imtixaanka meelaynta. Habeenkii...	Read More
Waxaan ardayda u diyaarinaa imtixaannada heerar kala duwan ee sanadka oo dhan. Imtixaanadan waxaa dejiya Cambridge English...	Read More
Dugsiga Dhexe, Cambridge
Xarunta Xadiiqada ee Stone
Taleefanka: + 44 (0) 1223 502004
© 2017 Dugsiga Dhexe ee Bartamaha, Cambridge